Author Topic: Dhiig karka Uurku Keeno / Sumoy / Iklaamsiyada (Read 31788 times)
« on: September 02, 2008, 09:52:57 AM »
Maxay tahay dhiig karka uurku keeno?
Waa xaalad kugu dhacdo marka aad uurka leedahay keliya. Calaamadaha waxaa ka mid ah barar khatar ah, dhiig kar, iyo brotiin kaadidada soo raaco.
Ma jiraa magacyo kale ee dhiig karka uurku?
Waxa loogu yeeri karaa dhowr magac oo kala duwan. Waxaa lagyaaba inaad maqashay iyadoo loogu yeerayo (sumoy), dhiig karka uurka, Ikalmsiyo ama ku boorinta dhiig karka uurka, ama dhiig karka uurka la khasbey (pregnancy induced hypertension).
Maxaa keena dhiig karka uurka?
Waxaa keena dhiig karka uurku lama yaqaan. Dhiig karka uurka waxuu bilawdaa haweenaydu uurka qaado laakiin calaamaduhu caadi ahaan ma soo baxaan ilaa 20-asbuuc ka dib uurka.
Haweenka halista u ah in dhiig karka uurka ku soo baxdo waxa ka mid ah kuwa leh:
• Dhiig kar raagay
• Cudurada kalyaha
• Uurka ugu horeeya
• Mataano sid
• Hooyo iyo/ama walaalo qabay cudurka
• Ka yar 17 ama ka badan 35 sano
Waa maxay astaamaha lagu garto?
Adiga ama dhakhtarkaaga waxaad fiiro u yeelan doontaan calaamadaha soo socoda:
• Kicitaan dhiig kareed
• Barar badan oo lugaha, wajiga, indhaha ama gacmaha.
• Borootiin kaadidaad la socoda
• Kaadida oo yaraato
• Laab jeex daran
Calaamado kale oo daran waxaa ka mid ah:
• Aragti caad leh ama aragti dhibco leh
• Qalal (Gariir)
• Dhibaato neefsashada
Haddii aad aragtan mid ka mid ah calaamadahaan, si degdeg ah isbitaalka u aad. Ha sugin ilaa ballantaada dambe.
Waa maxay natiijada suuragalka ah ee dhiig karka uurka yeelan karo aniga iyo cunnugga?
Haddii dhiig karka uurka aan la daawayn, waxaad halis u tahay cuduro khatar ah iyo Qalal.
Tani waxay xataa cunnugga ku gelin kartaa cuduro. Ka soo qaad, cunuggu uma korayo si wanaagsan waayo ma helayo ogsijiin iyo cunno ku filan. Xaaladaha aad u darani waxay cunugga u keeni kartaa dhimasho.
Sidee baan uga hortegi karaa dhiig karka uurka?
Dhiig karka uurka lagama hortagi karo. Wayaabaha lagu yareyn karo calaamaduhu waa:
• Qaado wakhtiyo nasasho ood u jiifto dhinacaaga. Naso ama seexo 1-2 saac barqadii iyo 1-2 saac galabtii.
• Cun cunto isu dheeli tiran oo ay ku jirto cunto brotiinkeedu sareeyo sida hilibka malaayga, ukunta, lowska shiidan, caano iyo digir. Cuntada brotiinku ku badanyahay waxay kaa caawimi doontaa iney badiso nafaqada cunugaaga. Weeydii qofka cunno yaqaanka ah haddii aad su'aal qabto.
• Cab cabitaan badan sida biyaha, casiirka iyo caanaha
• Haddaad sigaar cabto jooji.
• Ilaali ballamahaaga oo dhan aad la leedahay dhakhtarka.
Waa maxay daaweynta?
• Haddaan xilliyada nasiinada ee badan ay hoos u dhigi waayaan dhiig karka, bararkana dejin waayo, waxaad u baahnaan doonta in aad sariirta guriga sarnaato.
• Haddii nashadaada sariirta ayna soo rooneynin calamadahaas, waxaa lagu seexin doonaa cusbitaalka si aad u nasato, daawooyinkana u qaadato laguuna ilaaliyo.
• Haddii dhiig karku uurku sii socdo kana daro, dhakhtarku wuxuu kuu soo jeedi doonaa in loo baahanyahay in la dhaliyo cunuga.
Daawada dhiig karka uurku waa dhalida.
• Waxaa laga yaaba in lagu siiyo daawooyinka ay ka mid yihiin magnisyam salfayt si ay u yareeyaan khatarta qalalka.
• Markuu cunugu dhasho, waxaa laga yaabaa in aad fayoobato dhowr beri gudahood dhiig karku wuxuu ku soo noqon doonaa caadi, bararkuna waa degi doonaa.
Ma jiraan cudurro raaga oo uu keeno dhiig karka uurku?
Adiga ama cunuggaga ayaan lahaan doonin waxyeelo waqti dheer oo uu keeno dhiig karka uurku. Ma lahaan doontid khatar dhiig kar kugu soo baxa noloshaada dambe. Laakiin, waxaad khatar u tahay inuu kugu soo baxo dhiig karka uurarkaaga dambe.
Halkaan ka akhriso: Sonkorowga Uurka
Hadii aad qabto wax su'aalo ah ama faahfaahin halkaan naga waydii
Views: 133816 August 23, 2015, 02:14:13 PM
Views: 6564 May 07, 2011, 02:42:11 PM
Views: 10431 October 02, 2015, 10:46:27 AM
Views: 11540 January 09, 2016, 03:57:35 PM